Mofon’aina – ZOMA 22 SEPTAMBRA 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ZOMA 22 SEPTAMBRA 2017
11 Ary nony tonga tany Antiokia Kefasy, dia nanohitra azy nifanatrika aho, satria hita fa nanan-tsiny izy.12 Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin’ i Jakoba, dia niara-nihinana tamin’ ny jentilisa ihany izy; fa nony tonga ireo, dia nihatakataka izy ka niala, satria natahotra ny momba ny famorana izy.13 Ary ny Jiosy sasany koa niara-nihatsaravelatsihy taminy, ka Barnabasy avy aza mba voataonan’ ny fihatsaram-belatsihiny koa.14 Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan’ ny filazantsara ireo, dia hoy izaho tamin’ i Kefasy teo anatrehan’ ny olona rehetra: Raha ianao izay tena Jiosy aza no manao tahaka ny fanaon’ ny jentilisa, fa tsy tahaka ny fanaon’ ny Jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaon’ ny Jiosy?15 Taranaky ny Jiosy isika, fa tsy mba mpanota avy amin’ ny jentilisa,16 nefa nony fantatsika fa tsy hamarinina amin’ ny asan’ ny lalàna ny olona, fa amin’ ny finoana an’ i Jesoa Kristy, dia nino an’ i Kristy Jesoa koa isika mba hohamarinina amin’ ny finoana an’ i Kristy, fa tsy amin’ ny asan’ ny lalàna, satria tsy misy nofo hohamarinina amin’ ny asan’ ny lalàna.17 Fa raha mitady hohamarinina ao amin’ i Kristy isika, nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany!18 Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, dia mampiseho ny tenako fa diso aho.19 Fa raha izaho, dia tamin’ ny lalàna no nahafatesako ny amin’ ny lalàna, mba ho velona ho an’ Andriamanitra aho.20 Voahombo miaraka amin’ i Kristy amin’ ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ ny nofo dia ivelomako amin’ ny finoana ny Zanak’ Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy.21 Tsy mahafoana ny fahasoavan’ Andriamanitra aho; fa raha avy amin’ ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy.
GALATIANA 2 :11-21
NY VAVOLOMBELON’I JESOA KRISTY
1-Manohitra ny fihatsarambelatsihy
Niaina tamin’ny fihatsarambelatsihy i Petera . Nifandray tamin’ny Jentilisa izy . Rehefa misy olona heverina fa hatahorany hitsara azy anefa dia nasehony indray fa tsy mifandray amin’ireo izy. Reseo ny fihatsarambelatsihy, iaino ny Filazantsara noraisinao. Na aiza na aiza sehatra isehoanao dia ataovy ho zava-dehibe ny fitondrantena mahamendrika ny kristiana , indrindra ny fifandraisana amin’ny hafa . Haneho fitiavana ny olona rehetra.
2-Maneho ny fahamarinan’ny Filazantsara
Tsy nisalasala i Paoly Apostoly naneho fa ny finoana an’i Jesoa Kristy irery ihany no lalana ahafahan’ Andriamanitra manamarina ny olona ho ao amin’ny famonjena . Diso hevitra izay miady hevitra mahakasika ny lalàna. Ny zava-dehibe dia ny fitaomana ny olona hino sy handray an’i Jesoa Kristy eo amin’ny fiainany. Tsarovy, raha manana fotoana hifampiresahana amin’ny hafa ianao dia asehoy fa ny finoana an’i Jesoa Kristy ihany no mahavonjy.
3-Maneho ny fiainam-baovao
Mijoro ho vavolombelon’ny fiainam-baovao noraisiny noho ny finoana an’i Jesoa Kristy i Paoly Apostoly . Niara- maty tamin’i Jesoa Kristy izy. I Jesoa Kristy voahombo teo amin’ny hazo fijaliana no nitondra ny fahotany. Nitsangana tamin’ny maty ny Tompo, nanangana azy sy nitondra azy ho amin’ny fiainam-baovao izany. Velona ao amin’i Kristy izy ka azony antoka ny famonjena azy.
Ahoana no handresena ny fihatsarambelatsihy ?